Nezvedu - Mamiriyoni Ekugadzira | MM Solutions INC, mm mhinduro, mm mhinduro, mm mhinduro inc, mm mhinduro, mm mhinduro inc, miriyoni vagadziri mhinduro, mamirioni vagadziri mhinduro, mm llc, mamirioni makers llc
Chinangwa chedu ndechekugadzirisa matambudziko evatengi vedu uye nekupa zvakanakisa zviitiko.
Kutama Kugadziriswa Kunopihwa: 22,156.
Mhinduro dzemakambani, dzakapihwa: 86,742
Kutama Kugadziriswa: 22,156
Mhinduro kumakambani: 86, 742
Isu tinopa chete zvakagadziriswa mhinduro dzinoshanda zvakanyanya kwauri, chete mushure mekunzwisisa zvinangwa zvako uye Asappations.
Kubudikidza neruzivo rwedu hukuru uye dzakasiyana siyana dzakapihwa nekambani yedu sezvambotaurwa pamusoro apa, isu tinobatsira vanhu vamwe, mhuri uye mabhizinesi kuburikidza nehunyanzvi hwehunyanzvi kuti titamire, kuraramisa, kuwedzera uye kukura, isu takanyatsoiswa munzvimbo yekutungamira munzira yekubudirira. Kunyangwe iwe uchifarira kutamira, kubatana uye kutora kana kutsvaga kurodha maitiro ako ehofisi kumashure, kutsvaga capital kana mubatsiri wezano kana kutsvaga yako inotevera kizvarwa chirongwa chinotevera chirongwa, kubvunza zvemari nerubatsiro kana kutsvaga mabasa epfuma dzidzo kunze kwenyika kana IT mhinduro tinogona kukubatsira iwe mune ese masevhisi pamakwikwi emakwikwi kwazvo.
Isu takajeka uye tiri pachena maererano nemaitiro edu uye tinotarisira kuti anotevera anotevera anopindura akati wandei mibvunzo yako yakakosha
Isu tiri Kuzvipira uye isu "Maitiro kune vatengi vedu anogara ari ekutanga"
Isu tinotevedzera yakarongeka, inoshanda uye yakagadziriswa nzira inoshanda mukunakirwa kwevatengi vedu nemhuri dzavo semhinduro yakanakisa.
Isu tinomira sechivimbiso kune mumwe nemumwe uye Mumwe neumwe, Mumwe, Mhuri, Bhizinesi, Vabatsiri uye Vanowirirana.
Kurumidza uye kwakananga kutaurirana.
Kuchengetedzeka kwedata kwakakosha kwazvo kwatiri.
Yakagadziridzwa maererano nemitemo yenyika dzazvino.
Isu tiri mahunyanzvi tine nyanzvi yebhizinesi reruzivo.
Yakagadziriswa mhinduro kune vese Vatengi vedu nemhuri dzavo.
Isu tinosvika pakunzwisisa iwe, bhizinesi rako uye zvinangwa zvako zvizere uye zvakakwana usati wakurukura zvingangoita mikana kana mikana.
Isu tinoshanda nehuwandu hwepamusoro hwekunzwira moyo uye kushivirira nemutengi wedu, mibvunzo yako yose inopindurwa munguva pfupi pfupi inokwanisika mhinduro ine yakanakira kune zvaunoda uye mamiriro.
Isu tinogara takakwana, takakwana uye takabudirira chinangwa.
Isu tinotarisa chete pane izvo zviri nyore uye zvakanakira mhinduro chete, kune vatengi vedu.
Nekubatana kwakasiyana uye kumira mukati maMaindasitiri atinotungamira mukati, tinopa vatengi vedu mukana wekuwana kuzara kwemvura kwematariro.
Ndokumbirawo kuti muverenge nezve pamusoro pekushanda maitiro evatengi vedu uye vatinoshanda navo kushanda kwedu .
Yedu Solutions yeVanhu, Mhuri, uye Corporate
Bhizinesi reKutengesa / Kutenga
International Bhizinesi Setup uye Kuwedzera
All Services uye Solution
Nyika dzepasi makumi masere nesere uye makumi maviri nesere eUnited States
Maakaundi eRubhengi Munyika 95 uye Nyika makumi maviri neshanu dzeUSA
Iwe une bhizinesi yekumhanya, ngatibatei zvinonetsa zveHR maitiro ako.
Shandisa yedu Job Portal yemahara yemitengo kutsvaga vashandi kupi kana kupi pasi.
EU & masimba ekumahombekombe
International Trademark Kunyoreswa uye Kubatsira Munyika dzegumi nembiri
Hofisi dzeVirtual pamakero makumi matanhatu anonakidza epasi rose
Yakagadzirirwa Yakagadziriswa neDhizha Rokugadzira kubva pamadhora mazana maviri
Yakagadzirirwa Wewebhu mawebhusaiti
Yakasarudzika uye Yakasarudzika Dhiza Kutanga kubva pamadhora mazana maviri
Merchant Akaunti uye Kubhadhara Gedhi
Kubvumwa kwekubhadhara munyika dze190
Virtual Chiverengero che89 Nyika uye 290 Maguta.
Isu tinopa CRM mhinduro uye kubatanidzwa kuti ikupe iwe simba rekudzora pane rako bhizinesi.
Isu paMamirioni Macheya tinotanga kufunga nezvekuita kuti bhizinesi ribudirire.
Isu tine runyararo rwakasimba uye nekudyidzana pamwe nemasangano emari kune yako yekushanda capital capital yemari zvido.
Kupa mari zvishandiso zvako kunotendera iwe kuchengetedza mari yako yezvinhu zvakasiyana zvebhizinesi.
Nyanzvi dzekukoshesa kwedu vane hunyanzvi hwekuita mumabhuku, mutero, hupfumi uye dzidziso yekufungidzira.
1000+ Ma projekiti apedzwa
Isu tinoronga zvakaderera-mutengo pamutemo masevhisi kuMhuri, Mumwe, Vadzidzi, Makambani uye Corporates.
Isu tinokupa iwe chero chero mhando yebasa rezvemari rebasa.
Isu tinotsigira vanhu vamwe nevamwe uye makambani pakutsvaga mikana uye vanobvunzwa, zvichiteerana.
Chikwata chedu chinopa dzakasiyana siyana yebhizinesi yepasirese mhinduro
Isu tinokubatsira iwe kutsvaga vatungamiriri vekumusoro avo vanopa kugona kwakanyanya kunodiwa mukukura kwebhizinesi.
Isu tinopa hwakasiyana-siyana masevhisi kubatsira mabhizinesi kutanga kubva kune zvibvumirano zvebasa, HR manejimendi, kubhadhara uye mutero.
Tora mukana weye indasitiri yedu zivo uye proven rekutora nzira.
Isu tinotsigira Vanhu vamwe nemakambani mukutsvaga mikana
Isu tange tichirovera mabasa uye kubvunzana kune mabhizinesi ekugadzira bhizinesi, kuwedzera uye kukura.
Chikwata chedu chinopa huwandu hwakawanda wezvemabhizimusi epasi rose mhinduro izvo zvinobvumidza rako bhizinesi kubudirira.
Isu tinokubatsira iwe kutsvaga vatungamiriri vekumusoro avo vanopa kugona kwakanyanya kunodiwa mukukura kwebhizinesi
Virtual Chiverengero che89 Nyika uye 290 Maguta
Corporate uye Kusika Design, Kupindura, Navigational uye SEO OPTIMIZED
Imwe yekumira mhinduro mubatsiri wekupa mhinduro kumabhizinesi
Ecommerce Solutions yemhando yepasi rose
Yakagadzirwa zvinopfuura 351+ zvirongwa zvevatengi vedu vepasi rese.
Software chigadzirwa engineering kubva kubvunza kune kusimudzira, kuedza uye devOps.
Yako mhando`s uye zvigadzirwa `kukura online uye chizvarwa chemitobvu.
Kurarama mune yakakwira bhizinesi yakawanda uye mari
Yakasarudzika Blockchain mhinduro, zvisinei indasitiri yako.
Gadziridza ruzivo rwako rwakanangana nebasa rakasiyana-siyana ratinopa.
Ziva nezve zviitiko zvepasirose.
Tora nhau dzichangoburwa dzekutama, dzidzo, mabhizinesi maitiro, HR, mabhizinesi epasi rose mabhindauko anochinja isu tese, uye nezvimwe.
Koka shamwari dzako, vaunoshanda navo, mhuri uye ita bhizinesi idzva uye magariro.
Alternate Bhizinesi Chirongwa, Hapana dura inodikanwa, hukama nesu
Kana iwe uri kupa chero chero eve yedu sevhisi kupfuura nekuda kwekushingaira uye kutevedza masevhisi haisi kubhadharwa.
Ecommerce Solutions yemhando yepasi rose.
Merchant Account uye Kubhadhara Masuwo uye Kubhadhara Masuwo
Isu tinopa mhinduro mukupedzisa kubhadhara gedhi
Yako mhando`s uye zvigadzirwa `kukura online uye chizvarwa chemitobvu
Mukana wekutengesa / kureva uye kuumba yako pachako timu uye uwane.
Gadzira timu yako chero munyika
Tora Bhizinesi Ekuwedzera Tsigiro inosvika kumadhora mazana maviri
Ini ndiri Muridzi Wemabhizinesi Akazvimirira ungandibatsira sei?
Kubudikidza neruzivo rwedu rwakakura uye nemasevhisi akasiyana akapihwa nekambani yedu, isu tinobatsira varidzi vebhizimusi vakazvimirira pamwe nemhuri yavo kuumba kambani nekumisikidza bhizinesi idzva, kuwedzera, kukura nekusimudzira mabhizinesi avo, isu takamira zvakanaka kuti tikutungamire munzira yeku kubudirira. Kunyangwe iwe uchifarira M & A, chinja, uchitarisa kuburitsa muhofisi minutia, kutsvaga capital kana wekudyidzana naye kana kutsvaga yako inotevera chizvarwa chinoteedzana chirongwa. Izvi zvishoma nezvedu.
Kubudikidza neruzivo rwedu hukuru, hunyanzvi uye mabasa mazhinji akapihwa nesangano redu nekambani, isu tanga tichibatsira nekufambisa varidzi vemabhizinesi, makambani uye vekugara, pamwe nemhuri dzavo kubatanidza kambani uye kutanga bhizinesi idzva, kuwedzera, kukura uye kuchengetedza mabhizinesi avo kana tichitsvaga basa, takagadzika kwazvo kuti tikutungamirire munzira yekubudirira. Kunyangwe iwe uchifarira Merger uye Kuwana, kutama, kuda kudzosera kumashure mabasa ehurongwa nemafambisirwo, kuyedza kutsvaga capital kana mubatsiri wezano kana kutsvaga kuchizvarwa chako chinotevera kuronga kuronga, kana kutsvaga real estate kuraira kana Immigration Services kana Dzidzo Abroad kana IT Services isu tinogona kukubatsira iwe mune ese masevhisi sezvataurwa.
Isu tinopa akawanda masevhisi kune vatengi vedu vekunze uye vatinoshanda navo avo vanosanganisira Vagari, Vagadziri, Mari Yekudyara / VC Funds, Makambani uye Corporates. Incase, yemapurojekiti anoshanda uye angangobudirira, tinogona kubatsira mukudyidzana kwakabatana uye mikana yemari zvakare, kana zvichidikanwa.
Vatengi Kuwana Tsigiro
Incubation & Mari
Isu tine network yakakura kwazvo yevamiriri veInternet, saka senge rutsigiro, isu tinobatsirawo kubatanidza kutanga kwedu nevanhu vanogona kuita mari.